Diiwaanka Cannabis • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Tags Qoraalada lagu calaamadeeyay "cannabis"
2018 waa sanadka isbedelka weyn ee waaxda xashiishadda. Isticmaalka madadaalada ee xashiishadda ayaa sharci ka heshay Kanada iyo dhowr gobol oo Mareykanka ah. Luxembourg waa waddankii ugu horreeyay ee Yurub ee si buuxda sharci u siiya xashiishadda. Intaa waxaa u dheer, Thailand ayaa sharciyeysay iibinta iyo adeegsiga marijuanaada caafimaadka. Nederland gudaheeda, tijaabada haramaha ee degmooyin kala duwan ayaa wax waliba sii socdaan. Sharciyeynta xashiishadda cannabis waxay abuurtaa aragti dheeri ah oo ku saabsan isticmaalka, tayada waxsoosaarka waxayna ka saartaa dariiqa mareega dambiga. Xalka suuq geyn dawladu leedahay oo dawladu leedahay waa xalka?
albaabka Ties Inc. June 22 2022
Wasiirka waxbarashada Trinuch Thienthong ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay saameynta ay ku yeelan karto ardayda…
albaabka Ties Inc. June 21 2022
Cilmi-baaris dhowaan lagu daabacay The American Journal of Psychiatry waxay si dhow ula socotay ku dhawaad ​​1.000…
Booliiska Amsterdam ayaa xashiishad ka helay baaskiil xamuul waxayna dhexda u galeen €400.000 oo caddaan ah
albaabka Ties Inc. June 3 2022
Booliska Amsterdam ayaa xiray labo tuhmane oo ka ganacsanayay daroogada, waxaana ay heystaan ​​tiro badan oo…
cannabisCaafimaadkaWararkaSharci dejinta & Sharci dejinta
albaabka Ties Inc. 31 May 2022
Nederlaan - Tiro kooban oo bukaanno ah ayaa si sharci ah u helaya xashiishadda cannabis booqasho…
TikTok waxay leedahay maya xayaysiisyada xashiishadda
albaabka Ties Inc. 28 May 2022
Kadib sharciyeynta xashiishadda, maamulayaasha New York waxay sii daayeen macluumaadka caafimaadka iyo badbaadada.…
Iibinta xashiishadda New Jersey waxay keenaysaa $24 milyan bishii ugu horreysay
albaabka Ties Inc. 27 May 2022
Tan iyo markii iibinta marijuanaada madadaalada ee sharciga ah ay bilaabatay Abriil 21, kuwa bixiya xashiishadda ayaa…
cannabisDambiWargeysyada caalamiga ah ee cannabis
€2,8 milyan oo xashiishad ah ayaa lagu qabtay Rosslare Europort
albaabka Ties Inc. 26 May 2022
Ku dhawaad ​​140 kiilogaraam oo xashiishad ah ayaa lagu qabtay Rosslare Europort ee dalka Ireland iyadoo…